E-News Nepali || Fast and Accuracy » श्रीमतिले श्रीमानलाई बनाईन् घरको न घाटको! ९० लाख बढि पैसा लगेपछि सडकमा पुगे
श्रीमतिले श्रीमानलाई बनाईन् घरको न घाटको! ९० लाख बढि पैसा लगेपछि सडकमा पुगे
तेजबहादुर भण्डारीमहिला अधिकारका विषयहरुमा धेरै बहस भएका छन् । धेरै छलफल भएका छन् । कुनै महिलालाई अप्ठेरो परे महिला अधिकारको कुरा जोडबलले उठ्छ, उठ्नु पनि पर्छ । अझ महिला माथि हुने घरेलु हिंशा, शोषणका कुराहरु उठाइरहँदा नेपालमा पुरुष माथि चाहिँ यस्ता समस्या छन् छैनन भन्ने विषयमा कसैले ध्यान दिएको पाइदैन । एउटा परिवारबाट महिलामाथि घरेलु हिंशा हुन सक्छ, एउटी श्रीमतीलाई श्रीमान्ले विभिन्न टर्चर दिन सक्छ भने महिलाले दिन सक्लिन कि नसक्लिन ?
महिला हिंशा, महिला अधिकारकारको कुरासँगै आज म एउटा पुरुष हिंशाको विषय उठान गर्न चाहान्छु । अरु कसैको नभएर म मेरै पीडा यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहान्छु । मेरो पुरानो घर रामेछाप, पिंखुरी हो । झापा गाउँपालिका वडा नम्बर ६ मा म विगत केहि वर्षहरुदेखि बस्दै आएको छ । पुरुष माथि हिंशा हुँदैन भन्ने विषय म यहाँ प्रस्टाउन चाहान्छु । म पूर्व सैनिक हुँ । नेपाली सेनामा मैले काम गर्दा गर्दै मेरी श्रीमतीको आग्रह अनुसार म जागिर छाडेर विदेश गए । म करिब ८ वर्ष विदेश मै बसे । धेरै युद्ध हुने देश अफगानिस्तानमा मैले काम गरे । य त्यहाँ
सुपरभाइजरको रुपमा कार्यरत थिए । अफगानिस्तानमा कुन बेला को मर्छ ठेगान हुँदैन थियो । मैले ज्यानको बाजी मारेर त्यहाँ काम गरे । काम गरे अनुसार कमाई पनि मेरो राम्रो थियो । मैले त्यहाँ बसुञ्जेल ज्यानको प्रवाह नगरी काम गरे जसको फलस्वरुप मैले त्यस अवधिमा करोड रुपैयाँ हारहारीमा कमाए ।म सन् २००७ देखि २०१४ सम्म विदेशमै रहेँ । मैले कमाएको रकम पकेट मनि बाहेक सबै रकम म मेरी श्रीमतीलाई पठाउथे । त्यस अवधिमा मैले ९० लाख रुपैयाँ भन्दा माथि नै श्रीमतीलाई पठाएको छु । यो रकम कुन मितिमा कति पठाए भन्ने अधिकांश जस्तो प्रमाणहरु मसँग सुरक्षित छन् ।
ज्यानको खतरा भए पनि कमाई एकदमै राम्रो थियो । तर सधै पैसाको पछिमात्रै लाग्नु हुँदैन भन्ने मनमा सोचे । मलाई लगभग पुग्ने कमाए भन्ने भयो । झापमा घर समेत आफ्नो नाममा बनिसकेको थियो । विभिन्न ठाउँहरुमा लगानी समेत श्रीमतीले गरिसकेकी थिइन् । म बिदामा नेपाल आउथे, जान्थे । केहि समय परिवारसँग रमाइलो गरेर म पुनः विदेश आउने जाने गर्दा गर्दै पनि थोरै सम्पत्ति जोडिए पछि अबको जिंदगी
परिवारसँगै जिउछु । विदेशमा पसिना बगाएर जोडेको सम्पत्तिले परिवारसँग खुसी साट्छु भन्ने निधो गरे । यो कुरा मैले श्रीमतीलाई सुनाए । तर मेरो कुरामा श्रीमती राजि भइनन् । उनको आग्रह थियो विदेशमै बस्नु । घरको सबै म हेरिहाल्छु किन तपाई आउनु हुन्छ भन्ने श्रीमतीको आग्रह हुँदाहुँदै पनि स्वदेश फर्किए । मैले श्रीमतीको आग्रहलाई अस्वीकार गरेँ किनकी म श्रीमतीलाई विदेशमा बसेर होइन सँगै बसेर सुख दिन चाहान्थे । अझ मूख्य कुरा म मेरा सन्तानसँग हासिखुसी जिंगदी बिताउन चाहान्थे । यसकारण म श्रीमतीको आग्रहलाई अस्वीकार गर्दै नेपाल फर्किए ।
प्रकाशित मिति १९ माघ २०७६, आईतवार १६:४६